चीनको लङ्ग मार्च 8 रकेट 22 उपग्रहहरूलाई स्पेसमा पठाइनेछ – Pandaily
चीनको लङ्ग मार्च 8 रकेट 22 उपग्रहहरूलाई स्पेसमा पठाइनेछ
फेब 28, 2022, 12:26अपराह्न 2022/02/28 14:09:15 Pandaily
चीनले आइतबार 11:06 मा लङ्ग मार्च 8 रकेट को सफलतापूर्वक सुरू गर्यो, 22 नयाँ उपग्रहहरु लाई अन्तरिक्ष मा ल्याउन को लागी। कार्य दक्षिण एसियाली, वेन चाङ्ग स्पेस शटल प्रक्षेपण स्थलमा आयोजित भएको थियोएक एकल घरेलू रकेट प्रक्षेपण अन्तरिक्ष यान को सबै भन्दा ठूलो रेकर्ड बनाइयो.
लङ्ग मार्च 8 जुन आइतबार सुरू भएको मध्यम आकारको क्यारियर रकेट को लागि सुधारिएको छ। प्रोटोटाइप को तुलना मा, सुधार अर्को बूस्टर छैन, तर उपग्रह को विभिन्न कक्षाहरु को आवश्यकताहरु लाई शुरू गर्न सक्छन्। भर्खरै सुरुवात यो विशेष मोडेलको पहिलो उडान हो।
यसको अतिरिक्त, लङ्ग मार्च 8 अत्यधिक विषाक्त प्रोभेलेंट को उपयोग गर्दछ। सम्पूर्ण रकेट लम्बाई 48 मिटर, 198 टन टाढा पुग्यो। लङ्ग मार्च 8 ले लङ्ग मार्च VII कोइला ओक्सीजन र पुरानो लङ्ग मार्च III को3मीटर व्यास जल ओक्सीजन संयोजन को एक नयाँ पीढी को 3.35 मीटर व्यास संग व्यास हुनेछ। यो एक सिङ्क्रोनाइजेसन ट्रयाकमा तीन टन वितरण क्षमता प्राप्त गर्न सक्छ।
व्यवसायिक मिशनको 22 उपग्रहहरू ह्यानन 1-01 र 02, स्टार इra-17 (स्टार युग -17), वेन च्याङ्ग 1-01 र 02 र ताइवान 3-01. उपग्रह मुख्य रूपमा व्यावसायिक रिमोट सेन्सिङ सेवाका लागि प्रयोग गरिनेछ।
लङ्ग मार्च 8 लन्च वाहन अनुकूलन, सरकार र व्यापारिक प्रयोगकर्ताहरु सहित बहु-शरीर आवश्यकताहरु पूरा गर्न। यो तीन टन उपग्रहहरूको मूल्य नजिकको कक्षा वा मध्य कक्षामा सुरु गर्न सक्छ। यो रकेट बजारको लागि आवश्यक छ, विशेष गरी लन्च अवलोकन उपग्रह।
अर्को हेर्नुहोस्:2022 मा पहिलो सफल प्रक्षेपण उपग्रह
रकेट कमांडर जियो युनले भन्नुभयो कि लङ्ग मार्च 8 पारिवारिक विधानसभा र परीक्षण संयंत्र विन्न्च सुरुवात साइट बाहिर निर्माण भएको छ। एक पटक पूरा भएपछि, लङ्ग मार्च 8 रकेट लन्चर अन्तराल एक वर्ष 50 प्रक्षेपण प्राप्त गर्न7दिनसम्म छोटो छोटो छोटो छ। विधानसभा र परीक्षण संयंत्र निर्माण नजिकको साइटमा, तपाईं चरणहरूको एक श्रृंखलालाई मेटाउन सक्नुहुन्छ, लन्च साइट परीक्षण चक्रमा राकेट कम गर्नेछ।
Tagus Silver 1 Y2 वाणिज्यिक रकेटहरूले पाँच उपग्रहहरू सुरु गरे
मङ्गलबार, चीनले जेउक्वान सिटी उपग्रह प्रक्षेपण केन्द्रमा एक व्यावसायिक घाटी ईश्वर स्टार नम्बर2लन्च वाहन सञ्चालन गर्यो।
Industry डिस 08 डिसेम्बर 9, 2021